CAJIIB: Dhacdooyinkii Qariibka Ahaa & Xogtii Laga Diwaan Galiyay Kulankii Man United & Liverpool Ee Taariikhda Oo Xusi Doonta. - Cadalool.com
CAJIIB: Dhacdooyinkii Qariibka Ahaa & Xogtii Laga Diwaan Galiyay Kulankii Man United & Liverpool Ee Taariikhda Oo Xusi Doonta.
Kooxaha Liverpool iyo Manchester United ayaa kulan laysla daalay barbaro gool la’aan ah ugu galay Old Trafford, wuxuuna ahaa kulan gabi ahaanba khilaafsan kulamadii xili ciyaareedkan ee horyaalka Premier League. Liverpool ayaa ugu yaraan ku soo laabtay hogaanka Premier league iyaga oo hal dhibic ka sare maray Man City balse Man United ayaa lumisay kaalintii afraad ee ay ku soo jirtay.
Liverpool ayaa iska lumisay laba dhibcood oo kale waxayna si wayn albaabka ugu furtay Manchester City waxayna Reds hadda hogaanka ku haysaa 66 dhibcood halka Man City ay leedahay 65 dhibcood waxaana baaqi ah 11 kulan oo Premier league ah.
Dhinaca kale Man United ayaa kaalinta shanaad u dhacday kadib guushii ay Arsenal ka gaadhay Southampton iyo barbaraha ay United la gashay Liverpool waxayna United haysataa 52 dhibcood halka Arsenal ay 53 dhibcood yeelatay wuxuuna kulankeedu baaqday Chelsea oo Brighton la ciyaari lahayd balse Man City kula ciyaaraysa finalka EFL Cupka.
Haddaba maxay ahaayeen dhacdooyinkii qariibka ahaa ee laga diwaan galiyay kulankii Manchester United iyo Liverpool ee Old Trafford ka dhacay? Halkan kaga bogo xogta iyo waxyaabo ay naadir tahay in ay kulamada waa wayn ka dhacaan oo kulanan laga diwaan galiyay.
Manchester United ayaa saddexda isbadal ee tababare kastaba loo ogol yahay samaysay qaybtii hore ee kulankii Old Trafford, waana markii ugu horaysay ee kulan Premier league ah ay kooxi saddexdeeda badal wada adeegsatay tan iyo wixii ka danbeeyay January 2015 kii markaas oo Burnley saddexdeeda badal isticmaashay qaybtii hore ee kulankii Newcastle United.
Man United iyo Liverpool ayaa qaybtii hore ee kulankii Old Trafford sameeyay AFAR isbadal waana markii ugu horaysay ee ay arintan oo kale dhacday tan iyo wixii ka danbeyeay February 2009 kii markaas oo ay Wigan Athletic iyo Fulham sidan oo kale ay afar badal sameeyeen 45 kii daqiiqo ee qaybtii hore ee ciyaarta.
Jesse Lingard ayaa noqday ciyaartoygii ugu horeeyay ee qaybtii hore ee kulan Premier league ah badal ku soo galay isla markaana badal lagu saaray tan iyo wixii ka danbeeyay Kevin Long oo kooxda Burnley isla dhacdadan oo kale ay ku soo bartay kulankii Newcastle United ee January 2015 kii.
Maxay ahaayeen go’aanadii kale ee qariibka ahaa ee ay labada tababare Sameeyeen?
Jurgen Klopp: Tababaraha Liverpool ee Klopp ayaa jamaahiirta kooxdiisa kaga yaabsatay in markii uu Roberto Firmino dhaawucu soo gaadhay uu kaydka ka soo kiciyay Daniel Sturridge isaga oo haystay Origi, Shaqiri iyo Naby Ketia oo dhamaantood kaga fiicnaan lahaa in ay kulankan waqtigiisii soo galaan.
Laakiin jaamahiirta Liverpool ayay layaab ku noqotay in Klopp uu fahmi kari waayay sida ay kooxdiisu hal abuur ugu baahnayd ee aanu Naby Keita ciyaarta u soo galin waxayna su’aal galiyeen sababta uu Sturridge ku aaminay isaga oo kaydka ku haystay Orgi, Shaqiri iyo Keita.
Ole Gunnar Solskjaer: Tababaraha Man United ee Ole Gunnar ayaa isna sameeyay go’aan layaab noqday kadib markii uu isbadalada ku samaynayay saddexdii dhaawac ee soo gaadhay kooxdiisa qaybtii hore ee kulankan.
Ole Gunnar ayaa markii ay dhaawacyadu soo gaadheen Ander Herrera iyo Juan Mata waxa uu ciyaarta soo galiyay Andreas Pereira iyo Jesse Lingard waxaana waqtigan kaydka fadhiyay Alexis Sanchez oo ah xidiga ugu mushaarka qaalisan guud ahaan Premier league, waxayna noqotay u qaadan waa in Ole Gunnar uu Lingard oo dhaawac ka soo laabtay uu halis kale galiyay isaga oo heli karayay Sanchez oo diyaar ah.
Laakiin Ole Gunnar Solskjaerayaa farta dhexda ka qaniinay daqiiqadii 43 aad markii uu Jesse Lingard ku soo kacay dhaawicii garoomada loogula soo deg degay waxaana isaga oo aanu wajigiisu faraxsanayn garoonka soo galay Alexis Sanchez oo dareemay in dani ku baday uu Ole Gunnar ciyaarta ku soo galiyay.